Zanak’i Toamasina monina eto Antananarivo “Asio fitiliana faobe isaky ny fokontany ”
Manoloana ny Covid 19 mihanaka eto Antananarivo dia manambara izahay solontenan’ny zanak’i Toamasina monina eto Antananarivo,
hoy izy ireo omaly, fa tsy tokony avela irery amin’ny ady amin’ny Coronavirus ny fitondram-panjakana. Hevitra bontolo, hoy i Riribe na Henry Rakotomalala, ny filazana fa tokony hialana amin’izay ny fihibohana. Tokony jerena izay hahafahana miara-miady handresena ity valan’aretina ity hisorohana ny faty olona maro, hoy izy. Vahaolana naroson’izy ireo moa ny tokony hirosoana kosa amina fitiliana faobe fa tsy mijanona amin’io tsikelikely ataon’ny fitondram-panjakana io. Raha mitombo ny fianaky ny aretina dia tokony hanao fihibohana tanteraka na “confinement total” ny fitondram-panjakana. Asiana ny fitiliana faobe isaky ny fokontany na isaky ny tokantrano mihitsy aza. Efa io koa ny CVO, hoy hatrany I Riribe, izay nitarika ireto zanak’i Toamasina ireto, ka hampiasao hanasitranana ireo sanatria marary isam-pokontany.